ဝိန်းရွန်းနီ (Wayne Rooney) နဲ့ ကောလင်း (Coleen) တို့ စတုတ္ထသားငယ် မွေးဖွားပြီ
15 Feb 2018 . 4:41 PM
အဲဗာတန်တိုက်စစ်မှူးကြီး ဝိန်းရွန်းနီ (Wayne Rooney) ဟာ အခုဆိုရင် စတုတ္ထမြောက်သားငယ် ရရှိလာပြီလို့ သိရပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၅) ရက်နေ့ (ဒီနေ့) မနက်ခင်းတုန်းက ဇနီးသည် ကောလင်း (Coleen) က စတုတ္ထသားငယ် မွေးဖွားခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း လူမှုကွန်ရက် တွတ်တာ (Twitter) မှ တရားဝင်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ သားငယ်ရဲ့နာမည်ကို ကပ်စ်မက် (Cass Mac) လို့ နာမည်ပေးထားပြန်ပါတယ်။ သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှ အောက်ပါအတိုင်း ပြောကြားထားပါတယ်။
“သားငယ်လေးရေ ကြိုဆိုပါတယ်ကွယ် . . . Cass Mac က
၈ပေါင်နဲ့ ၁ဝအောင်စတောင် ရှိပါတယ်။ ချစ်စရာကြီးပဲ”
ရွန်းနီတို့ဇနီးမောင်နှံမှာ (၈) နှစ်အရွယ် သားကြီး ကိုင်ရွန်းနီ (Kai Rooney) ၊ (၄) နှစ်အရွယ် ကလေးရွန်းနီ (Klay Rooney) နဲ့ (၂) နှစ်ရွယ် ကစ်ရွန်းနီ (Kit Rooney) ဆိုပြီး သုံးယောက် မွေးထားပြန်ပါတယ်။ ပထမသားသုံးယောက်ရဲ့နာမည်ကို K စာလုံးနဲ့ စတင်ခဲ့ပြီး စတုတ္ထကလေးကိုလည်း K နဲပဲ စတင်မယ်လို့ ပရိသတ်တွေ ထင်မှတ်ထားပေမယ့် ‘Cass Mac’ လို့ပဲ နာမည်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ရွန်းနီတို့နှစ်ယောက်ဟာ ၁၂နှစ်အရွယ်ကတည်းက သိကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး (၁၆) နှစ်အရွယ်မှာ ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ၂ဝဝ၈ခုနှစ် ဇွန်လ (၁၂) ရက်နေ့မှာ လက်ထပ်ခဲ့ပြီး အခုချိန်မှာ သားလေးယောက် ထွန်းကားနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဝိနျးရှနျးနီ (Wayne Rooney) နဲ့ ကောလငျး (Coleen) တို့ စတုတ်ထသားငယျ မှေးဖှားပွီ
အဲဗာတနျတိုကျစဈမှူးကွီး ဝိနျးရှနျးနီ (Wayne Rooney) ဟာ အခုဆိုရငျ စတုတ်ထမွောကျသားငယျ ရရှိလာပွီလို့ သိရပါတယျ။ ဖဖေျောဝါရီလ (၁၅) ရကျနေ့ (ဒီနေ့) မနကျခငျးတုနျးက ဇနီးသညျ ကောလငျး (Coleen) က စတုတ်ထသားငယျ မှေးဖှားခဲ့ပွီဖွဈကွောငျး လူမှုကှနျရကျ တှတျတာ (Twitter) မှ တရားဝငျကွညောခဲ့ပါတယျ။ သားငယျရဲ့နာမညျကို ကပျဈမကျ (Cass Mac) လို့ နာမညျပေးထားပွနျပါတယျ။ သူမရဲ့လူမှုကှနျရကျမှ အောကျပါအတိုငျး ပွောကွားထားပါတယျ။
“သားငယျလေးရေ ကွိုဆိုပါတယျကှယျ . . . Cass Mac က
၈ပေါငျနဲ့ ၁ဝအောငျစတောငျ ရှိပါတယျ။ ခဈြစရာကွီးပဲ”
ရှနျးနီတို့ဇနီးမောငျနှံမှာ (၈) နှဈအရှယျ သားကွီး ကိုငျရှနျးနီ (Kai Rooney) ၊ (၄) နှဈအရှယျ ကလေးရှနျးနီ (Klay Rooney) နဲ့ (၂) နှဈရှယျ ကဈရှနျးနီ (Kit Rooney) ဆိုပွီး သုံးယောကျ မှေးထားပွနျပါတယျ။ ပထမသားသုံးယောကျရဲ့နာမညျကို K စာလုံးနဲ့ စတငျခဲ့ပွီး စတုတ်ထကလေးကိုလညျး K နဲပဲ စတငျမယျလို့ ပရိသတျတှေ ထငျမှတျထားပမေယျ့ ‘Cass Mac’ လို့ပဲ နာမညျပေးလိုကျတာဖွဈပါတယျ။
ရှနျးနီတို့နှဈယောကျဟာ ၁၂နှဈအရှယျကတညျးက သိကြှမျးခဲ့တာဖွဈပွီး (၁၆) နှဈအရှယျမှာ ခဈြသူတှဖွေဈခဲ့ကွပါတယျ။ ၂ဝဝ၈ခုနှဈ ဇှနျလ (၁၂) ရကျနမှေ့ာ လကျထပျခဲ့ပွီး အခုခြိနျမှာ သားလေးယောကျ ထှနျးကားနပွေီပဲဖွဈပါတယျ။